Imac Pro oo leh 14-iyo 18-core processor-yada ayaa soo rari doona sanadka soo socda | waxaan ka imid mac
IMac Pro oo ay la socdaan Processorrada 14 iyo 18-core ayaa soo rari doona sanadka soo socda
Ruben gallardo | | iMac
iMac Pro, nooca ugu bahalnimada badan ee kumbuyuutarka desktop-ka caanka ah ee Apple laga soo ballansan karaa soo socota Diseembar 14. Sidoo kale, iyo maadaama aysan jirin cid ka maqan, qalabkan waxaa lagu gaari karaa qaabab kala duwan. Mid ka mid ah wax ka beddelka ugu caansan waa midka tixraacaya processor-ka.
IMac Pro cusub wuxuu la imaan doonaa soo-saareyaal Intel Xeon. Oo sida muuqata, sida la daaha ka qaaday, ma lahaan doono 3 fursadood, laakiin guud ahaan afar. Moodooyinka ugu horreeya ee la soo dejiyo waxay noqon doonaan kuwa ku saleysan 8-core iyo 10-core processor-yada Intel Xeon. Si kastaba ha ahaatee, sanadka soo socda 2018 laba nooc oo kale ayaa la filayaa in lagu daro. Oo mid iyaga ka mid ah oo aan la garanayn ilaa hadda.
Ilaa hadda waxaa la ogaa in iMac Pro, oo ah nooca ugu sarreeya, uu lahaan doono 18-core Intel Xeon. Hadda, sida uu qabo YouTuber-ka caanka ah ee Marques Brownlee, sidoo kale model leh chip 14-core ayaa ka soo muuqan doona goobta habka.
Haddii aan eegno bogga rasmiga ah ee Apple, qaabkani meelna kama soo muuqdo. Si kastaba ha ahaatee, waxaanu rumaysanahay erayada abuuraha teknoolajiyada caanka ah ee ka kooban. Dhanka kale, marka loo eego imtixaanada la sameeyay ilaa hadda, imtixaanada waxqabadka, iMac Pro waa ilaa 93% ka dhakhso badan 5K iMac ama ilaa 43% ka dhakhso badan Mac Pro 2013.
Sidoo kale, xusuusnow in iMac Pro uu yeelan doono 5-inch Retina 27K bandhigay -Ma jiro nooc ka yar, oo loogu talagalay omentum-; suurtagalnimada in lagu daro ilaa wadarta 32 GB ee xusuusta RAM; ama meel wax lagu kaydiyo oo ku salaysan SSD wadista ilaa 1 TB.
Ugu dambeyntii, mid ka mid ah soojiidashada - si qurux badan u hadla - waa midabka ay dooratay Apple si loo bilaabo. Tani waxay noqon doontaa Goob Goob, tonality oo horeba loogu heli jiray qalabyada kale (iPhone, MacBook, MacBook Pro ama iPad) ee shirkadda oo badanaa waa guul iib.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » iMac » IMac Pro oo ay la socdaan Processorrada 14 iyo 18-core ayaa soo rari doona sanadka soo socda
Cusbooneysiinta cusub ee Cut Cut Pro ayaa soo socota
Apple waxay hagaajineysaa barnaamijkeeda dib u soo celinta ee loo isticmaalo Macs